भक्तपुर नगरपालिका–७ : पाँच स्वास्थ्यकर्मीसहित ६ संक्रमित
भक्तपुर नगरपालिका–७ : पाँच स्वास्थ्यकर्मीसहित ६ संक्रमित कोरोना वाच
रेणु त्वानाबासु भक्तपुर - आइतबार, भदौ २८, २०७७
भक्तपुर नगरपालिकाको वडा ७ मा अहिलेसम्म ६ जनामात्र कोरोना भाइरसका संक्रमित पुष्टि भएका छन्।
त्यसमा ५ महिला र १ पुरुष भएको वडाका अध्यक्ष उकेश कवाःले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार वडामा ६ जनामा संक्रमण पुष्टि भए तापनि संक्रमित परिवारको घरमा सिल नगरिएको उनले बताए।
वडाध्यक्ष कवाःले भक्तपुर जनस्वास्थ्य केन्द्रबाट वडावासीमा कोरोनाको पोजेटिभ रिपोर्टको खबर पाएपछि टोलबासीसँग बैठक बसेर अगाडि बढने गरेको बताए ।
सबैको सहमतिमा संक्रमितका परिवारतका लागि अत्यावश्यक सामान व्यवस्थापनको जिम्मा टोलवासीकै एक दुईजना सदस्यलाई दिने गरेको कवाःले सुनाए ।
पानीदेखि अन्य सामान छिमेकीले आफ्नो भाडामा थापेर संक्रमित परिवारको भाडामा राखिदिने गरेको उनले बताए । ‘सबैजना सहयोगी भएका कारणले हामीले अहिलेसम्म कसैको घर सिल गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘साथै संक्रमित परिवारलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्ने गरेका छौं। त्यसलाई सबैले पालना गर्दै आउनुभएको छ।’
संक्रमित सदस्यमा एक पुरुषबाहेक सबै स्वास्थ्यकर्मी रहेको उनले जानकारी गराए । एकजना पुरुषचाहिँ भारतबाट आएर यहाँ बसेका व्यक्ति हुन् । ‘उनलाई उपचार गरेर हामीले भारत नै फर्काइदियौं,’ उनले भने।
अहिले वडा ७ मा १७ जनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराइएको छ ।
वडाध्यक्ष कवाः भन्छन्, ‘अहिले समाजमा बुझेर वा नबुझेर उल्टो काम गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलनका लागि खासमा हामीले कसैसँग कुरा गर्दा मास्क लगाउनुपर्छ तर अहिले हामी धेरैजसो कुरा गर्नुपर्यो वा गर्ने बेलामा मास्क फुकालिहाल्छौं जुन गलत हो ।’
आवाज सुन्दैन भनेर पो हो कि? भन्दै उनी व्यंग्य गर्छन्।
खास कुरा गर्ने बेला र हाच्छिँयु आउने बेलामा मास्क लगाइराख्न जरुरी भएको उनी बताउँछन् । बाहिर बूढापाका पनि बोल्ने बेलामा मास्क खोलेर बोलिरहेका हुन्छन्। जुन बारम्बार स्थानीयहरूले सम्झाउने काम गरिरहेको उनले बताए।
यस्तो बेला पनि मानिसहरू मन्दिर गएर पूजा गरिरहेका हुन्छन् । उनले भने, ‘मानिसहरूलाई यस्तो बेला मन्दिर नजानुस् भनेर सल्लाह दिन्छौं तर ‘बरु म मरे मरोस्, देवतालाई पूजा गर्न छोड्दिन’ भन्छन् । के गर्ने?’
कोरोना भाइरसको उपचार त होइन, तर त्यसबाट बच्नका लागि अनिवार्य मास्क लगाउने र बाहिरबाट घरभित्र छिर्नुअघि साबुनपानीले हात धुने गरेर यसबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ । साथै अस्पताल जाँदा संक्रमित बिरामीले झुटो नबोल्न राम्रो हुने उनको अपेक्षा छ ।
संक्रमितले सही सूचना दिएको खण्डमा उपचार गर्ने र गराउने दुवैलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ । साथै उनले यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमित हुन कम हुन्छ कि? भन्ने विश्वास राखे ।
‘कोरोना संक्रमितलाई सहयोग गरौं र स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गरौं’ भन्ने यो भनाइ अहिले समाजका लागि आवश्यकता रहेको वडाध्यक्ष कवाः बताउँछन्।